बैशाख (८०) – लघुकथा बिशेषांक – सुलेख साहित्यिक मासिक पत्रिका
सुलेख साहित्यिक मासिक पत्रिका > साहित्य > प्रकाशन > २०७६ > बैशाख (८०) - लघुकथा बिशेषांक
निर्णय / अवतार ढकाल
June 15, 2019 बैशाख (८०) - लघुकथा बिशेषांक, लघुकथा
बेलुकीको खानापछि छोरा बुहारी दुवैजनासँगै मेरो कोठाभित्र पसे । सानो नाति एक्लै बोल्दै खेलाउना गाडी खेलाइ–रहेको थियो । “पक्कै पनि केही सल्लाह गर्न आएका हुनुपर्छ ।” मेरो मनले भन्यो । उनीहरू दुवैRead More…
डर / आविष्कार भारती
“ओइ, केसरे सुनिस् ?” “के सुन्नु हौ ?” “माथ्ला घरे काने काकाको साहिँली त लिम्बु मास्टर च्यापेर हिँडिछे नि !” “राम्रै त गरिछे त, मास्टर राम्रै कमाउँछ रे त । त्यसमाथि केRead More…
ओरजिनल अमेरिकन / सुरेश गौतम
“मामु ! म कति वर्षपछि सेल्फ डिपेन्डेनट भएर बस्न सक्छु ?” छोराले स्कुलबाट आउँदा आउँदै आफ्नो ब्याग फत्रक्कै फ्याँकेर भन्यो । “भर्खरै त बाह्र वर्ष भइस् । तँलाई एक्लै बस्न किनप¥यो ?”Read More…
मेरो देश / श्रीकृष्ण पौडेल
विश्वपुर उद्यानको पूर्ववर्ती इलाकामा एउटा सुन्दर तलाउ थियो । त्यस तलाउमा असला, भोटी, बुदुना, झिङ्गे, वाम, रहु र फगेटा आदि विभिन्न जातका माछाहरू बस्थे । ती माछाहरूबीच अत्यन्त सुमधुर सम्बन्ध थियो ।Read More…
अकबरी सुन / एकदेव अधिकारी
कान्छो छोराको दीक्षान्त समारोहका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा हेरिरहेका थिए दीनबहादुर । हिजोजस्तो लाग्छ विद्यालयमा प्रधानाध्यापकले उसको प्रशंसा गरेको । प्रत्येक वाक्य उनको अगाडि मानौँ ध्वनीत भइरहेथ्यो । “हजुरको कान्छो होनहार छ ।Read More…
ल्याइते श्रीमान् / कृष्णजी शर्मा (घनश्याम डल्लाकोटी)
अश्विनीका दुई श्रीमतीहरू, ब्याइते अनुराधा र ल्याइते अश्लेषा हुन् । । साहित्यकार अश्विनी नेपाली साहित्यका एक नक्षत्र नै हुन् । अति रसिक स्वभावका अश्विनी नेपालका जुनसुकै साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा प्रमुख अतिथि या निर्णायकRead More…
पछुतो / एस किराँती
आज गणेशको जागिरको अन्तर्वार्ता थियो । त्यसकारण हिजैदेखि ऊ उत्साहित भएको थियो । आज बिहानै उठेर नुहाइधुवाइ गरेर चिटिक्क परेर ऊ घरबाट निस्कियो । भन्नुपर्दा उसको शैक्षिक योग्यता कम्प्युटर डिप्लोमा इन इन्जिनियरिङRead More…
काम / ऋचा
साथीभाइले उनलाई रामे भनेर बोलाउँथे । किशोरवयलाई बिदाइको हात हल्लाउँदै युवा अवस्थामा प्रवेश गर्ने तरखरमा लाग्दै गरेको उमेर । सोझो र इमानदार । चिनजानको व्यक्तिको भनसुनमा एक निजी कार्यालयमा पियनको जागिर पाएदेखिRead More…
सम्बन्ध / रमेश भट्टराई ‘पुजारी’
“अहो, मीतज्यू नमस्कार मितिनीसँगै लिएर कता हो ?” बटुकेले छक्क पर्दै सोध्यो । “छोरो भोलि कतार उड्ने यहाँबाट छोरालाई नाइट गाडीमा चढाएर फर्केका अनि मीतज्यू आफूचाहिँ कताबाट नि ? “मितले प्रतिप्रश्न राखेRead More…
तँ सही छस् / लक्ष्मण अर्याल
“दाइ, चिन्नुभयो ?” — उसले प्रश्न ग¥यो मसँग । “चिनेँ, किन नचिन्ने” — निरास नबनाउन मैले जवाफ फर्काएँ उसलाई । “धेरै भयो भेटघाट नबनेको तर चिन्नुभयो । मलाई चिन्नुहुन्छ जस्तो लागेकै थिएनRead More…